Manaiky ny Lasa, Ny Ankehitriny, Ary Ny Hoavin’ny Zanatany Amerikana Ny Tanàna Iray Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Manaiky ny Lasa, Ny Ankehitriny, Ary Ny Hoavin'ny Zanatany Amerikana Ny Tanàna Iray Ao Etazonia
Voadika ny 28 Oktobra 2016 13:43 GMT
Mamaly ny “Christophe Colomb” ireo zanatany Amerikana. Ilay lahatsary, izay novokarin'ny WatchCut Video, dia navoaka voalohany indrindra tamin'ny Novambra 2015, saingy niverina nivezivezy indray tao amin'ny media sosialy manodidina ny Andro ho an'i Colomb 2016. Tsindrio ny sary raha hijery ilay lahatsary ao amin'ny YouTube.
Ity tatitra avy amin'ny The World Staff ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 10 Oktobra 2016. Naverina navoaka eto izy ity ho isan'ny fifanarahana amin'ny fizarana votoaty.
Niditra anatin'ny lisitra kely saingy mitombo an'ireo tanànan'i Etazonia izay atao mandritra ny andron'i Colomb i Denver, any Colorado.
Ny herinandro lasa teo, niara-nifidy ny hanamarika ny Alatsinainy faharoa an'ny volana Oktobra ho Andro ho an'ny Vahoaka Zanatany ny filan-kevitry ny tanàna tany an-toerana.
Ny voalohandohan'ity taona ity, nifidy ny handray ny Andro ho an'ny Vahoaka Zanatany ny Filan-kevitry ny tanànan'i Asheville (Caroline du Nord). Torak'izany koa i Eugene (Oregon), Cambridge (Massachusetts), Boulder (Colorado), Santa Fe (Nouveau-Mexique), Yakima (Washington), Phoenix (Arizonà), ary ny fanjakan'i Vermont.
An-taonany maro ireo mpikatroka mafana fo zanatany Amerikana no nanosika ny mba hanafoanana ity andro tsy fiasàna ity noho ny fankalazana ny nahatongavan'ilay Eoropeana mpikaroka tany vaovao, Christophe Colomb tamin'ny 1492 mba “hahita” tanibe efa ipetrahanà vahoaka zanatany an'arivony. Tonga hanamarika ny fihanaky ny fanjanahantany sy ny famotehana ireo kolontsain'ny zanatany tany Amerika Avaratra sy Atsimo io andro fialan-tsasatra sy io lehilahy io.
Nilaza ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny tanànan'i Denver fa tafiditra anatin'ity hetsika ity ny fanambaran'izy ireo, entina hanomezana voninahitra ireo Zanatany Amerikana sy hamerenana mametraka ny anjara asa ara-tantara tena nolalaovin'i Colomb, 500 taona mahery lasa izay.
“Ny tena fototry ny tanànantsika dia avy amin'ny vahoaka zanatany aty Denver,” hoy ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna, Paul Lopez, taorian'ny fifidianana.
“Izany no ataonay dia satria mamafa ny karazana tantara tahaka izany ny boky mirakitra ny tantarantsika,” hoy i Lopez. “Manome voninahitra izany ianao amin'ny alàlan'ny famadihanao azy ho hita maso.”
Taonjato maro lasa izay, nampiasa ny tany sy renirano manodidina an'i Denver ireo foko Arapaho sy Cheyenne hitobiany mandritra ny vanim-potoana iray. Ankehitriny dia foko Amerikana Indiana maherin'ny 100 no miaina ao Denver sy ny manodidina.
“Tena mirehareha aho,” hoy i Maymangwa Flying Earth, miaraka amin'ny Voamieran'ny Amerikana Indiana ao Denver.
“Izaho manokana dia sady Lakota no Ojibwe ary Akimel O'odham,” hoy ny fanazavan'i Maymangwa. “Mirehareha aho fa manomboka miresaka ny dikan'izany — maha-olona zanatany— ny vahoaka. Angamba mahatsiaro ireo mponina ao Denver fa vao tsy ela izay no nisy fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mankasitraka ny Andron'i Colomb sy ireo manohitra izany.”
Milaza i Maymangwa fa manamarika fandresena io andro fialan-tsasatra vaovao io ary mampiseho fa “mihazona ny tanànantsika ny fanabeazana sy ny fahalalàna, ary afaka manova ny tantara ho zavatra manome voninahitra sy manaiky ny anjara biriky nataon'ireo vahoaka zanatany.”
“Mirehareha aho noho ny fananan'ny zanako vavy izany ho isan'ny zavatra iainany mandritra ny fitomboany anatinà tanàna izay manaiky ny vahoaka zanatany”.
Saika marika fotsiny ihany io andro fialan-tsasatra io any Denver. Ny ankamaroan'ny vahoaka dia mbola tsy maintsy miasa. Kanefa, milaza i Maymangwa fa mampiseho ny fiovan'ny toe-tsaina io fanapahan-kevitry ny tanàna io.
“Ny mpandresy no nanoratra ny tantara tamin'ny fomba fijeriny, saingy raha ny momba antsika kosa dia ny mpambabo no nanao izany” hoy izy. “Tsy miasa amintsika ny fomba fijerin'ny fanjanahantany ny tantarantsika. Diso izy ireny.”
Zarao: twitter facebook reddit googleplus
16 Janoary 2020Azia Atsinanana
‘Tsy hanampina ny vavako raha izay fampiatoana’: Tanora miteny taorian'ny nanisihana hafatra momba ireo Uyghurs ao Xinjiang tao anaty fampianarana ankosotra TikTok
30 Desambra 2019Alzeria
Alzeria : Niondrika teo anatrehan'i Etazonia i Alzeria, niverina ny saina
27 Desambra 2019Eoropa Afovoany & Atsinanana
Amin'izao faha-70 taonan'ny OTAN izao, manohintohina ny filaminan'ireo firenena mpikambana kely kokoa ny fanovàna ny laharampahamehana
Aty aminay izany. 🙂
29 Oktobra 2016, 07:02
Ka tsy lazaina ho teratany any koa ve ianareo?
30 Oktobra 2016, 02:57
Hiresaka koa -> Andriamifidisoa Zo
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Nederlands, বাংলা, Español, English
Febroary 2020 36 Lahatsoratra